Waxaan leeyahay, Guurka hala fududeeyo si ay dhalinyaradu ugu dhiirato
» Waxaan leeyahay, Guurka hala fududeeyo si ay dhalinyaradu ugu dhiirato
Hargeysa 16, March 2011 (SDN)- Guddoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa ku taliyay in la khafiifiyo nidaamka Guurka, si ay dhalinyarada dalku ugu dhiirato.
Guddoomiyaha UCID oo hadal ka jeediyay munaasibad madax tiro badani ka qaybgaleen oo lagu qabtay hotelka Maansoor, waxa ka digay halista Jaadka oo uu sheegay inuu dhaawacyo xun gaadhsiiyay bulshada reer Somaliland, isla markaana loo baahan yahay in aan laga xishoon sheegista dhibtiisa. “Imika marka la eego, hablaha iyo wiilasha, hablahaa badan, shaqaduna way yartahay oo aafaddaa sheekhu sheegayna (Jaadka) way jirtaa oo sheegista dhibtiisa in laga xishoodo maaha, sababtoo ah bulshadeenii buu Jaadku baabi’iyay. Waxa la ii sheegay, berigii Ingiriisku joogay baa nin Badhasaab ahaa oo kontomeeyadii Hargeysa joogay baa odhan jiray, ‘cadow qudhaa leeyihiin’, markaas la odhan jiray ‘ma Xabashidaa?’, dabadeedna wuxuu odhan jiray mayee, waa Jaadka,” ayuu yidhi guddoomiyuhu. Wuxuuna intaa ku daray, inuu shaqsiyan fagaareyaasha ka sheegi jiray dhibaatada Jaadku bulshada ku hayo, isla markaana ay dhawr jeer lagu qoonsaday hadalkiisa. “Bahalku mushtamaceenii meel xun buu ka galay, sababtoo ah wax lagu daydo ayuu noqday oo Macalinkii baa cunaya, Wasiirkii baa cunaya, Suldaankii baa cunaya, markaa ilmuhu wuxuu ku hamiyayaa inuu gaadho inuu sida kuwaa u cuno. Markaa waxaan filayaa in haddii dadkeena hoggaamiyeyaasha ahi iska daayaan, in carruurtu ku dayan lahayd,” ayuu raaciyay.
Eng. Faysal Cali Waraabe, waxa uu sheegay in aan loo baahnayn in habka Guurka la adkeeyo, taas bedelkeedana loo baahan yahay sidii loo khafiifin lahaa arrimaha Guurka, si ay dhalinyarada dalku ugu dhiiradaan. “Sidaa aawadeed, waxaanu jecelahay in Guurka la dhiirigeliyo, waxaanan leeyahay Guurka hala dhiirigeliyo oo ha laga daayo inuu qofka dhalinyarada ahi ka baqo oo uu yidhaahdo waxaas oo kharash ah heli kari maysid, markaa in la khafiifiyo ayaa fiican, si aanay dhalinyaradu uga niyad-jabin, sidaas baanan ku talin lahaa,” ayuu yidhi guddoomiyuhu.waxaa laga soo xigtaysomalidiasporanews.com
Runsheeg dumar4/05/2011Guurka in lafududeeyo ayaa kheyrka kujiraa waliba in la iskaalmeystaa fiican balse meherka la qaaliyeeyo si aan loogu dag dagin furiin waa siday aniga ilatahay.ReplyDeleteAdd commentLoad more...